Credits စျေး - အွန်လိုင်း CRE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Credits (CRE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Credits (CRE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Credits ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $7 854 221.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Credits တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Credits များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CreditsCRE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.45CreditsCRE သို့ ယူရိုEUR€0.382CreditsCRE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.345CreditsCRE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.411CreditsCRE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr4.06CreditsCRE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.2.84CreditsCRE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč10.04CreditsCRE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł1.68CreditsCRE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.602CreditsCRE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.628CreditsCRE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$10.07CreditsCRE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$3.49CreditsCRE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$2.45CreditsCRE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹33.75CreditsCRE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.75.97CreditsCRE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.617CreditsCRE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.681CreditsCRE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿14.05CreditsCRE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥3.13CreditsCRE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥47.66CreditsCRE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩534.94CreditsCRE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦174.02CreditsCRE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽33.16CreditsCRE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴12.47
CreditsCRE သို့ BitcoinBTC0.00004 CreditsCRE သို့ EthereumETH0.00114 CreditsCRE သို့ LitecoinLTC0.00776 CreditsCRE သို့ DigitalCashDASH0.00461 CreditsCRE သို့ MoneroXMR0.00482 CreditsCRE သို့ NxtNXT31.46 CreditsCRE သို့ Ethereum ClassicETC0.0646 CreditsCRE သို့ DogecoinDOGE127.95 CreditsCRE သို့ ZCashZEC0.00472 CreditsCRE သို့ BitsharesBTS17.13 CreditsCRE သို့ DigiByteDGB15.47 CreditsCRE သို့ RippleXRP1.52 CreditsCRE သို့ BitcoinDarkBTCD0.0153 CreditsCRE သို့ PeerCoinPPC1.5 CreditsCRE သို့ CraigsCoinCRAIG202.01 CreditsCRE သို့ BitstakeXBS18.91 CreditsCRE သို့ PayCoinXPY7.74 CreditsCRE သို့ ProsperCoinPRC55.63 CreditsCRE သို့ YbCoinYBC0.000238 CreditsCRE သို့ DarkKushDANK142.15 CreditsCRE သို့ GiveCoinGIVE959.55 CreditsCRE သို့ KoboCoinKOBO99.4 CreditsCRE သို့ DarkTokenDT0.414 CreditsCRE သို့ CETUS CoinCETI1279.42
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 04:40:02 +0000.